ဘုရား အကွံအစညျ (၅)
"ဤ​အ​ကွံ ဤ​အ​မှု​သညျ လူ၏​အ​ကွံ လူ၏​အ​မှု​ဖွဈ​လြှငျ ပကျြ​စီး​ခွငျး​သို့ ရောကျ​လိမျ့​မညျ။- ဘု​ရား​သ​ခငျ၏​အ​ကွံ​အ​မှု​ဖွဈ​လြှငျ သငျ​တို့​သညျ မ​ဖကျြ​ဆီး​နိုငျ​ကွ။ သငျ​တို့​သညျဘု​ရား​သ​ခငျ၏ အာ​ဏာ​တျော​ကို ဆနျ​သော​သူ​မ​ဖွဈ​မညျ​အ​ကွောငျး သ​တိ​ပွု​ကွ​လော့​ဟုပွော​ဆို၏။-”(တ၊၅;၃၈-၃၉)
လူ့အကွံအစညျနဲ့ ဘုရားအကွံအစညျ ဘယျလိုသိနိုငျသလဲ၊ လူတိုငျးကတော့ ဘုရားအကွံအစညျ ဘယျဟာဖွဈတယျ လူ့အကွံအစညျဘယျဟာဖွဈတယျဆိုတာကို ခှဲခွားသိခငျြကွတယျ။ ရလှေမျးမိုးပွီးတဲ့နောကျမှာ မိုးထိမွငျ့အောငျဆောကျတဲ့ ဗာဗုလုနျရဲတိုကျကွီးကိုမှတျမိတယျမဟုတျလား။ ဘုရားက မြားပွားစှာမှေးဖှားပွီးတော့ မွေ ကွီးကိုပြံနှံ့ဖို့ အကွံအစညျတျောရှိပမေယျ့ သူတို့က တနရောထဲမှာစုနပွေီး နောကျတကွိမျ ရလှေမျးမိုးတဲ့အခါမှာ လှတျမွောကျဖို့အတှကျကွံစညျကွတယျ။ ဒါကတကယျတော့ ဘုရားပွောတဲ့ နောကျတဖနျ ရလှေမျးမိုးခွငျးကိုမပွုဘူးဆိုတာကို မယုံကွညျတာပါ။ ဘုရားအကွံအစညျ တျောက နှုတျကပတျတျော ဘုရားစကားအပျေါမှာ အခွေ ပွုထားပွီးတော့ လူ့အကွံအစညျကတော့ နှုတျကပတျ တျောဘုရားစကားကိုဆနျ့ကငျြတာ ပိုမြားပါတယျ။အထပျ မွငျ့ဆောကျလို့ ဘုရားသဘောမကတြာမဟုတျပါဘူး။ ဆောကျရတဲ့ ရညျရှယျကွံစညျခကျြကိုသဘောမကတြာပါ။ လူတှရေဲ့အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ အကွံအစညျတှကေ နောကျဆုံးမှာတော့ ပကျြစီးခွငျးနဲ့ပဲ အဆုံးသတျသှားပါတယျ။ အဆုံးသတျသှားတာလညျး ဘာမှ မယျမယျရရကွောငျ့မဟုတျဘူး၊ စကားမတူကှဲပွားသှားတာကွောငျ့ပါ။ အကွီးအကယျြအားစိုကျပွီးတော့ နှဈပေါငျးမြားစှာလုပျဆောငျလာတဲ့အရာ မိနဈပိုငျးလေးအတှငျးမှာ ပွိုကပြကျြစီးသှားတာကွုံဖူးမှာပါ။ ဘာကွောငျ့မြားလညျးလို့ ထုတျစရာမေးခှနျးတောငျမရှိလောကျအောငျပါပဲ။အဓိကတော့ လူ့အကွံအစညျက ဘယျတော့မှ အဆုံးထိ ပွညျ့စုံတယျဆိုတာရှားပါတယျ။ ဘုရားအကွံအစညျတျောသာ ဘယျသူဖကျြဖကျြ မပကျြပဲ ပွညျ့စုံတာပါ။
တနပေ့ကျြစီးမယျ့အရာအတှကျ အခြိနျမကုနျခငျြဘူးဆိုရငျ လှယျလှယျလေးပါ၊ အခုကတညျးကကိုယျ့ အကွံအစညျနဲ့ကိုယျအသကျရှငျတာကိုရပျတနျ့ပွီးတော့ ဘုရားအကွံအစညျကို ဝနျခံအပျနှံတတျဖို့လိုတယျ။ သုတ်တံဆရာကတော့ဒီလိုဆိုတယျ၊-
“လူ​သညျ မိ​မိ​သှား​ရာ​လမျး​ကို စိတျ​ထဲ​မှာ ကွံ​စညျ၏။ သို့​သျော​လညျး သူ၏​ခွေ​ရာ​တို့​ကို ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား စီ​ရငျ​တျော​မူ၏။”(သုတ်တံ၊၁၆:၉)
ကိုယျ့ရဲ့စိတျကူးအကွံအစညျတှအေမြားကွီးရှိရငျတောငျ အကောငျအထညျဖျေါဖို့က ဘုရားပါဖို့လိုပါတယျ။ ဘုရားမပါပဲဘယျစိတျကူးအကွံအစညျကမှ ပွညျ့ စုံလာမှာမဟုတျဘူး။ သူကပဲအရာခပျသိမျးကိုထိမျးခြုပျ ထားတယျဆိုတာကိုမမနေဲ့။ လူတခြို့ ကိုယျ့ဟာကိုယျမေး ခှနျးထုတျနတေဲ့အရာတှရှေိတယျ။ အခွားသူတှအေသကျ တာမှာလမျးလှဲနပွေီ၊ မမှနျဘူးလို့ ကိုယျကထငျပမေယျ့ သူတို့အသကျတာမှာ တနတေ့ခွား ပိုပွီးပွညျ့စုံလာတယျ ဘုရားကောငျးကွီးပေးမစတာကိုတှရေ့တဲ့အခါမှာ နားမလညျနိုငျဘူး။ ကိုယျကတြော့ အရမျးကွိုးစားတယျဘုရား နဲ့မှနျတယျလို့လညျးကိုယျ့ဟာကိုယျမွငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ အသီးအပှငျ့တှေ၊ ဘုရားဂတိတျောတှကေ အသကျတာမှာ ပွညျ့စုံလာတာ မတှရေ့သလောကျပဲ။ ဘာကွောငျ့မြားလဲ? ဘုရားကလူမွငျသလိုမွငျတာမဟုတျဘူးဆိုတာရယျ၊ မှနျတယျမှားတယျဆိုတယျဆိုတာကို လူက ဆုံးဖွတျလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ အရမျးလိုတယျ။ ကိုယျက မှားတယျ သတျမှတျပမေယျ့ အဲ့ဒီအရာက မှားခငျြမှမှားနတောမြိုးပါ။ ကိုယျက အမှားလို့မွငျပမေယျ့ သူက ဘုရားအကွံအ စညျတျောထဲမှာ လြှောကျလှမျးနတေဲ့သူ တဈယောကျ ဖွဈမယျဆိုရငျ အခြိနျတနျတဲ့အခါမှာ ပကျြစီးမသှားပဲ ဘုရားအလိုတျော အကွံအစညျက ပွညျ့စုံစမှောပါ။ အရေးကွီးဆုံးကတော့ ကိုယျတိုငျနစေ့ဉျ လြှောကျလှမျးတဲ့ ခွလှေမျးတှကေ ဘုရားအကွံအစညျအလိုတျောထဲမှာဖွဈဖို့ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့ဒါဆိုဘယျအရာမှ ပကျြစီးသှားမှာမဟုတျဘူး ပွညျ့စုံလာအုံးမှာပါ။
ဘုရား အကြံအစည် (၅)
"ဤ​အ​ကြံ ဤ​အ​မှု​သည် လူ၏​အ​ကြံ လူ၏​အ​မှု​ဖြစ်​လျှင် ပျက်​စီး​ခြင်း​သို့ ရောက်​လိမ့်​မည်။- ဘု​ရား​သ​ခင်၏​အ​ကြံ​အ​မှု​ဖြစ်​လျှင် သင်​တို့​သည် မ​ဖျက်​ဆီး​နိုင်​ကြ။ သင်​တို့​သည်ဘု​ရား​သ​ခင်၏ အာ​ဏာ​တော်​ကို ဆန်​သော​သူ​မ​ဖြစ်​မည်​အ​ကြောင်း သ​တိ​ပြု​ကြ​လော့​ဟုပြော​ဆို၏။-”(တ၊၅;၃၈-၃၉)
လူ့အကြံအစည်နဲ့ ဘုရားအကြံအစည် ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ၊ လူတိုင်းကတော့ ဘုရားအကြံအစည် ဘယ်ဟာဖြစ်တယ် လူ့အကြံအစည်ဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ခွဲခြားသိချင်ကြတယ်။ ရေလွှမ်းမိုးပြီးတဲ့နောက်မှာ မိုးထိမြင့်အောင်ဆောက်တဲ့ ဗာဗုလုန်ရဲတိုက်ကြီးကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ ဘုရားက များပြားစွာမွေးဖွားပြီးတော့ မြေ ကြီးကိုပျံနှံ့ဖို့ အကြံအစည်တော်ရှိပေမယ့် သူတို့က တနေရာထဲမှာစုနေပြီး နောက်တကြိမ် ရေလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာ လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြံစည်ကြတယ်။ ဒါကတကယ်တော့ ဘုရားပြောတဲ့ နောက်တဖန် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုမပြုဘူးဆိုတာကို မယုံကြည်တာပါ။ ဘုရားအကြံအစည် တော်က နှုတ်ကပတ်တော် ဘုရားစကားအပေါ်မှာ အခြေ ပြုထားပြီးတော့ လူ့အကြံအစည်ကတော့ နှုတ်ကပတ် တော်ဘုရားစကားကိုဆန့်ကျင်တာ ပိုများပါတယ်။အထပ် မြင့်ဆောက်လို့ ဘုရားသဘောမကျတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆောက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ကြံစည်ချက်ကိုသဘောမကျတာပါ။ လူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အကြံအစည်တွေက နောက်ဆုံးမှာတော့ ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ အဆုံးသတ်သွားတာလည်း ဘာမှ မယ်မယ်ရရကြောင့်မဟုတ်ဘူး၊ စကားမတူကွဲပြားသွားတာကြောင့်ပါ။ အကြီးအကျယ်အားစိုက်ပြီးတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ဆောင်လာတဲ့အရာ မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ပြိုကျပျက်စီးသွားတာကြုံဖူးမှာပါ။ ဘာကြောင့်များလည်းလို့ ထုတ်စရာမေးခွန်းတောင်မရှိလောက်အောင်ပါပဲ။အဓိကတော့ လူ့အကြံအစည်က ဘယ်တော့မှ အဆုံးထိ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာရှားပါတယ်။ ဘုရားအကြံအစည်တော်သာ ဘယ်သူဖျက်ဖျက် မပျက်ပဲ ပြည့်စုံတာပါ။
တနေ့ပျက်စီးမယ့်အရာအတွက် အချိန်မကုန်ချင်ဘူးဆိုရင် လွယ်လွယ်လေးပါ၊ အခုကတည်းကကိုယ့် အကြံအစည်နဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တာကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ ဘုရားအကြံအစည်ကို ဝန်ခံအပ်နှံတတ်ဖို့လိုတယ်။ သုတ္တံဆရာကတော့ဒီလိုဆိုတယ်၊-
“လူ​သည် မိ​မိ​သွား​ရာ​လမ်း​ကို စိတ်​ထဲ​မှာ ကြံ​စည်၏။ သို့​သော်​လည်း သူ၏​ခြေ​ရာ​တို့​ကို ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား စီ​ရင်​တော်​မူ၏။”(သုတ္တံ၊၁၆:၉)
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအကြံအစည်တွေအများကြီးရှိရင်တောင် အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့က ဘုရားပါဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားမပါပဲဘယ်စိတ်ကူးအကြံအစည်ကမှ ပြည့် စုံလာမှာမဟုတ်ဘူး။ သူကပဲအရာခပ်သိမ်းကိုထိမ်းချုပ် ထားတယ်ဆိုတာကိုမမေ့နဲ့။ လူတချို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မေး ခွန်းထုတ်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ အခြားသူတွေအသက် တာမှာလမ်းလွဲနေပြီ၊ မမှန်ဘူးလို့ ကိုယ်ကထင်ပေမယ့် သူတို့အသက်တာမှာ တနေ့တခြား ပိုပြီးပြည့်စုံလာတယ် ဘုရားကောင်းကြီးပေးမစတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာ နားမလည်နိုင်ဘူး။ ကိုယ်ကျတော့ အရမ်းကြိုးစားတယ်ဘုရား နဲ့မှန်တယ်လို့လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အသီးအပွင့်တွေ၊ ဘုရားဂတိတော်တွေက အသက်တာမှာ ပြည့်စုံလာတာ မတွေ့ရသလောက်ပဲ။ ဘာကြောင့်များလဲ? ဘုရားကလူမြင်သလိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်၊ မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတယ်ဆိုတာကို လူက ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုသိဖို့ အရမ်းလိုတယ်။ ကိုယ်က မှားတယ် သတ်မှတ်ပေမယ့် အဲ့ဒီအရာက မှားချင်မှမှားနေတာမျိုးပါ။ ကိုယ်က အမှားလို့မြင်ပေမယ့် သူက ဘုရားအကြံအ စည်တော်ထဲမှာ လျှောက်လှမ်းနေတဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အချိန်တန်တဲ့အခါမှာ ပျက်စီးမသွားပဲ ဘုရားအလိုတော် အကြံအစည်က ပြည့်စုံစေမှာပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကိုယ်တိုင်နေ့စဉ် လျှောက်လှမ်းတဲ့ ခြေလှမ်းတွေက ဘုရားအကြံအစည်အလိုတော်ထဲမှာဖြစ်ဖို့ဆိုတာပါပဲ။ အဲ့ဒါဆိုဘယ်အရာမှ ပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး ပြည့်စုံလာအုံးမှာပါ။